Press Release on official visit by President U Win Myint and First Lady Daw Cho Cho to Thailand from 14 to 16 June – Ministry of Foreign Affairs
Press Release on official visit by President U Win Myint and First Lady Daw Cho Cho to Thailand from 14 to 16 June
At the invitation of His Excellency General Prayut Chan-O-Cha (Ret.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand, U Win Myint, President of the Republic of the Union of Myanmar and wife Daw Cho Cho paid an official visit to Thailand on 14 June 2018, and attended the 8th Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) Summit and 9th Cambodia- Laos- Myanmar- Viet Nam (CLMV) Summit held in Bangkok from 15 to 16 June 2018.
On 14 June 2018, President U Win Myint and wife Daw Cho Cho were accordedaceremonial welcome by His Excellency Prime Minister General Chan-O-Cha at the Government House. President U Win Myint held bilateral talks with the Prime Minister General Chan-O-Cha(Rtd.) at the Government House. During the meeting the two leaders had cordial discussions on strengthening of the existing traditional friendship and multi-faceted cooperation, providing assistance for the development of Rakhine state and peace process in Myanmar as well as cooperation for development of border areas. The Prime Minister of Thailand pledged his continued support to Myanmar Government’s efforts for peace and national reconciliation, development and democratization process. They also discussed on matters relating to celebration of the commemorative activities in both countries, as this year marks the 70th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between Myanmar and Thailand. They also exchanged views on upgrading the transport linkages between Myanmar and Thailand including cross-border linkage between Dawei Deep Sea Port and eastern coast of Thailand, promoting trade and investment, repatriation of displaced persons from Thailand to Myanmar and cooperation under ACMECS framework. The President also sought the assistance of the Royal Thai Government for protection of labour rights of Myanmar migrant workers in Thailand and assuring their due entitlements. During the meeting, President U Win Myint expressed Myanmar’s support to Thailand for its forthcoming Chairmanship of ASEAN in 2019.After the bilateral meeting, the two leaders made Joint Press Briefing at the Government House.
In the evening of 14 June 2018, Myanmar Delegation led by President U Win Myint attended the banquet hosted by Prime Minister General Prayut Chan-O-Cha (Rtd.) at the Government House.
In the morning of 15 June 2018, President U Win Myint attended the opening ceremony of the ACMECS CEO Forum which was held under the theme of “Connecting the Future: Enhancing ACMECS Cooperation and Integration”. The Forum was organized with an aim to provide platform for the government, private sectors and financial institutions from ACMECS countries and development partners to share information and experiences, exchange of views and to come up with recommendations and initiative for the enhancement of effective cooperation under ACMECS framework. At the Forum, the President deliveredavision statement, highlighting the importance of public-private sector and their participation in the implementation of the ACMECS cooperation programmes.
The President attended Gala Dinner hosted by the Prime Minister of Thailand, on 15 June 2018, in honour of the visiting delegations to the ACMECS Summit and potential development partners.
In the Morning of 16 June 2018, Myanmar delegation led by the President attended the Opening Ceremony of the 8th ACMECS Summit and visited the ACMECS Exhibition, which features strengths and future prospects of each ACMECS member country.
President U Win Myint then attended the 8th ACMECS Summit held under the theme of “Towards an Integrated and Connected Mekong Community”. The meeting was chaired by H.E. Gen. Prayut Chan-O-Cha(Rtd), Prime Minister of Thailand, and joined by H.E. Samdech Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, H.E. Mr. ThonglounSisoulith, Prime Minister of Lao PDR, and H.E. Mr. Nguyen XuanPhuc, Prime Minister of the Socialist Republic of VietNam. At the meeting, President U Win Myint reviewed the progress and challenges of ACMECS Cooperation and discussed future directions of cooperation, particularly regarding the implementation of projects and programmes related to hard and soft connectivity and human resources development under the ACMECS Master Plan (2019-2023). At the conclusion of the Summit, the leaders adopted two outcome documents: ACMECS Master Plan 2019-2023 and Bangkok Declaration. Some of the important projects to be implemented under the Master Plan include the improvement of road connectivity between Myanmar, Thailand and Viet Nam, creation of environment enabling Mekong countries to increase intra-regional trade and facilitation of travel among the Mekong countries.
The President then attended the 9th CLMV Summit held under the theme of “For Greater Economic Integration and Connectivity” after the 8th ACMECS Summit. The meeting was chaired by H.E. Samdech Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, and joined by the Leaders of Lao PDR, Myanmar, and Viet Nam. At the meeting, President U Win Myint reviewed progress of CLMV cooperation and discussed future directions including the promotion of trade, investment and development of infrastructures. The Leaders adopted Joint Statement of the 9th CLMV Summit. The projects approved by the Leaders include conducting feasibility study to constructaroad linking Myanmar-Laos-Viet Nam.
President attended the Interactive Luncheon hosted by H.E. Gen. Prayut Chan-O-Cha(Rtd), Prime Minister of Thailand. The luncheon was organized withaview to strengthening the participation of the private sector in ACMECS Cooperation and providingaplatform for interactive dialogues between ACMECS Leaders and top entrepreneurs from ACMECS member countries.
ACMECS (Ayeyawady- Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation) isasub-regional economic cooperation mechanism established in 2003 at Bagan, Myanmar with five member countries; Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand and Viet Nam.
CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Viet Nam Cooperation) is another sub-regional cooperation mechanism established in 2004 at Vientiane, Lao PDR with four member countries; Myanmar, Cambodia, Laos and Viet Nam.
President U Win Myint and wife Daw Cho Cho were accompanied by Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin, Deputy Minister for Commerce U Aung Htoo and Senior Officials.
Myanmar Delegation led by President U Win Myint arrived back Nay Pyi Taw by special flight in the evening of 16 June 2018.
Dated: 16 June 2018
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ချိုချိုတို့၏ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီး၊ (၈)ကြိမ်မြောက် အက်မက်စ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် (၉)ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ချိုချို တို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာ(ငြိမ်း)၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့နှင့် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဗန်ကောက်မြို့၌ ကျင်းပသည့် (၈)ကြိမ်မြောက် ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖရား- မဲခေါင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ (အက်မက်စ်) ထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် (၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား- လာအို-မြန်မာ-ဗီယက်နမ် (စီအယ်လ်အမ်ဗွီ) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ချိုချိုတို့သည် ၁၄-၆-၂ဝ၁၈ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာ(ငြိမ်း)က အစိုးရအိမ်တော်၌ ပြုလုပ်သည့် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ သည် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာ(ငြိမ်း)နှင့်တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား ရှိရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးတက် ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးရေးကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဖော်ဆောင်မှုနှင့် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာ(ငြိမ်း)က မြန်မာအစိုးရ၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်မှုများအပေါ် ဆက်လက် ထောက်ခံ အားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့သည် ယခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် မြန်မာ-ထိုင်း သံတမန် ဆက်သွယ်မှု စတင်သည့် နှစ်(၇ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နှစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကျင်းပမည့်ကိစ္စ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်မှု အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံအကြား လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုများ မြှင့်တင်ရေးကိစ္စ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ နေရပ်ပြန်လိုသည့် နေရပ်စွန့်ခွာသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် အက်မက်စ်လုပ်ငန်းစဉ် မူဘောင်အောက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ထိုက်သင့်သည့် ရပိုင်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးရေးကိုလည်း ထိုင်းအစိုးရအား မေတ္တာရပ်ခံ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူမည့်အပေါ် ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့သည် ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ၁၄-၆-၂ဝ၁၈ ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာ(ငြိမ်း)မှ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား အစိုးရအိမ်တော်၌ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်တို့နှင့်အတူ “Connecting the Future: Enhancing ACMECS Cooperation and Integration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ACMECS CEO Forum ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖိုရမ်ကို ACMECS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား သတင်းအချက်အလက်များ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ အတွေးအမြင်များ ဖလှယ်ရန်နှင့် ACMECS ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မူဘောင်အောက်ရှိ ပေါင်းစည်း ဆက်သွယ်မှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး စသည့်နယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ACMECS ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၏ အရေးပါမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာ(ငြိမ်း)မှ ACMECS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များအား ဂုဏ်ပြုတည်ခင်း ဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့၊ နံနက်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် (၈)ကြိမ်မြောက် ACMECS ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ACMECS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အားသာချက်၊ အနာဂတ် အလားအလာကောင်းများကို ထင်ဟပ်ပြသထားသည့် ACMECS ပြခန်း (Exhibition) သို့ လှည့်လည် ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ”ပေါင်းစည်းဆက်နွှယ်မှုရှိသည့် မဲခေါင် အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ထောင်ရေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၈)ကြိမ်မြောက် ACMECS ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာ(ငြိမ်း)မှ သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန်၊ လာအိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ထောင်လွန်းဆီ ဆုလစ်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ငုယင်စွန်ဖုတို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အစည်းအဝေး၌ ACMECS ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ACMECS လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၃)ပါ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်မှု၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည် ဖော်ရေး စသည့် အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ ACMECS လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၃)နှင့် ဗန်ကောက်ကြေညာ စာတမ်းတို့ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ACMECS လုပ်ငန်းစီမံချက်အသစ်အရ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအကြား ကုန်းလမ်းဆက်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရန်၊ မဲခေါင်နိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် အခြေအနေကောင်းများ ဖန်တီးပေးရန်နှင့် မဲခေါင်နိုင်ငံများအကြား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ ခရီးသွားလာမှု ပိုမို လွယ်ကူစေရေးအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ ပါဝင်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အဖွဲ့သည် ”စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှု ပိုမိုမြှင့်တင်ရေးသို့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၉)ကြိမ်မြောက် CLMV ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ဆက်လက် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန်က သဘာပတိအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူ လာအိုနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့မှ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ သည်။ အစည်းအဝေး၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် CLMV ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို သုံးသပ်ခဲ့ပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရေးတို့အပါအဝင် အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အစည်းအဝေး၌ ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ CLMV ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် မြန်မာ၊ လာအိုနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အကြား ဆက်သွယ်မည့် ကားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေ လေ့လာရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားရန် စီမံချက်လည်း ပါဝင်သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲ (Interactive Luncheon) သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ နေ့လယ်စာစားပွဲကို ACMECS နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် ACMECS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများမှCEO များအကြား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်နှင့် ACMECS ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရန်ရည်ရွယ်၍ စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ACMECS (ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖရား-မဲခေါင် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ) သည် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံမြို့၌ စတင်ခဲ့သော ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံများ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည်။
CLMV (ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး)သည် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် လာအိုနိုင်ငံ ဗီယန်ကျင်းမြို့၌ စတင်ခဲ့သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်သို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ချိုချိုတို့နှင့်အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးနှင့် အတူ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ လိုက်ပါသွားခဲ့ပါသည်။
င်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်